August 2018 - Glamorous Icon
Monthly Archives: १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:४५
Home›१४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:४५›१४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:४५
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह स्टार फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लन्‍डनमा’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ। युट्युबमार्फत फिल्मको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो। ट्रेलरमा फिल्मका मुख्य दुई कलाकार साम्राज्ञी र धिरज मगरबीचको प्रेम र अन्तर द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गरिएको छ। रेनशा बान्तवा राई निर्देशित फिल्ममा साम्राज्ञी र धिरजसँगै विवेक लिम्बू, शारुक ताम्राकार, सुनिशा बजगाईंलगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। नृत्य निर्देशक ...
प्रदर्शन मिति तय नगरिएको चलचित्र ‘कस्मिक लभ’मा समावेश ‘कोया कटहरको’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । दिनेश सुवेदीको शब्द रहेको यो गीतमा रामचन्द्र काफ्ले र लक्ष्मी स्याङताङको स्वर, बबुल गिरीको संगीत छ । गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार प्रशान्त ताम्राकार, दिया मास्के, राजाराम पौडेल लगायतलाई देख्न सकिन्छ । वीएस बलामी र एसके अधिकारीको निर्देेशनमा ...
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:२९
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र र म्यूजिक भिडियोमा रियल लाइफ जोडीलाई खेलाउने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ । रियल जोडीलाई स्त्रिmनमा दर्शकले एकसाथ हेर्न चाहन्छन् भन्ने बुझाईले गर्दा यो ट्रेन्ड बढेको हो । आयूष्मान देशराज जोशी खासै चलेका अभिनेता होइनन् । तर, नायिका प्रियंका कार्कीसँग प्रेममा परेपछि उनको व्यस्तता बढेको देखिन्छ । आयुष्मान र प्रियंकाले चलचित्र मात्र ...
हतारमा सुटिङ सकेर चलचित्र ‘रोज’ को टिम पब्लिसिटी कन्सर्टका लागि भोली उपत्यका बाहिर निस्किँदै छ । त्यसअघि चलचित्रका मुख्य कलाकार प्रदिप खड्का, परमिता आरएल राणा र मिरुना मगर वुधबार पत्रकारमाझ प्रस्तुत भए । सामान्यतया कलाकारहरु चलचित्रको रिलिज अगाडि आफ्नो भूमिकाको बारेमा धेरै कुरा खुलाउँदैनन् । चलचित्रको कथा लिक होला भन्नेमा सचेत रहन्छन् । तर, ...
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार १५:१८
“ Final Call’s for Audition” 《《Teej Fashion show & Musical Event 》》 Interested candidates call us or inbox us your number for details. Requirements: Min 5.’5” (Male) & 5’0”/Above (Female) Age :-15 to 35 with attractive personality (Freshers/professionals) Bring2PP size ...
अमेरिकामा बसोबासरत गीतकार अम्बिका गुरुङका शब्दहरूको नयाँ आधुनिक गीत ‘आदत–२’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युवा गायक सुमन केसीको स्वर रहेको गीतमा शंकर थापा स्माइलको संगीत छ । गीतमा उदयराज पौडेलको एरेन्जमेन्ट छ । भावसागर ईन्टरटेन्मेन्ट एलएलसीद्वारा प्रस्तुत गरिएको भिडियोमा शान थापाको निर्देशन छ । भिडियोमा पल शाह, पुष्प खड्का, निराजन प्रधान र ...
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार १२:५६
प्रचारको उदेश्यले कन्सर्ट सहित टुरमा निस्किएको ‘मेरी मामु’ टिमले शनिबार दमैलीमा सांगीतिक धुम मच्चाएको छ । दमौलीको अनसनचोकमा आयोजित कन्सर्टमा कलाकार र दर्शकले एकसाथ कम्बर मर्काएका छन् । बिहीबार काठमाडौं बालाजुस्थित बिजी महलबाट शुरु भएको चलचित्रको यो कन्सर्ट (रोड शो)का कलाकार भक्तपुरको सुर्यबिनायक, किर्तिपुर, लगनखेल हुँदै शनिबार उपत्यका बाहिर निस्किएका हुन् । दमैली कार्यक्रममा कलाकार ...
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार १२:५१
The man standing 183 cm tall, 29 years of age, Dikpal Karki would be heading to Myanmar to represent Nepal at Mister Model of the World 2018 being held in Yangon, Myanmar from August 29 till September52018. In the year 2017 Dikpal competed for Mister Grand International 2017 hled in Philippines and was ...
नेप्लीज फेसन होमले आयोजना गर्न लागेको बालिका तथा किशोरीहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘किड क्विन नेपाल–२०१८’ का प्रतियोगीहरुले गत शनिवार राजधानीमा आफ्नो प्रतिभा देखाएका छन् । ट्यालेन्ट शोमा १८ जना प्रतिस्पर्धिहरुले आ–आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रतियोगितामा सहभागि काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत बालिका तथा किशोरीहरुमध्ये अधिकांशले ट्यालेन्ट शोमा नृत्य प्रदर्शन गरे । त्यसक्रममा ओजस्वी महर्जन, वृक्ष्ाँ ...
‘हिमालय ब्युटी पेजेण्ट २०१८’को उपाधि सुजाता देउजाले जितेकी छिन् । काठमाडौंको जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा हिमालय प्याजेण्ट द्वारा आयोजित ‘‘हिमालय ब्युटी पेजेण्ट २०१८’ मा अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै सुजाताले उक्त उपाधि जित्न सफल भएकी हुन् । उक्त प्रतियोगितामा अन्जना ज्योति फस्ट रनर अप, बिमिता खत्री सेकेन्ड रनरअप त्यसैगरी अनिशा घिसिङ थर्ड रनरअप बन्न सफल भए ...